Izindaba - IRockwell International ithola u-Allen Bradley
IRockwell International ithola u-Allen Bradley
URockwell ubeka ukuthi iRockwell, ikomkhulu layo eliseMilwaukee, eWisconsin, iyinkampani yezizwe esebenza ngemishini eyizinkulungwane eziyikhulu. Ukuthuthuka kwenkampani kulo mncintiswano ononya kangaka kuthole imiphumela emihle kangaka, efakazela amandla aqinile enkampani, ubungqabavu bayo, kanye nekhono layo lokuqapha elibukhali emakethe, ukuzivumelanisa nezimo namasiko amakhulu ezinkampani.
Umlando omfushane wentuthuko
Ekuqaleni, ngo-1903, uLynde Bradley noDkt.Stanton Allen basebenzise imali yokuqala engu- $ 1 000 ukusungula iCompression Rheostat Company. Ngo-1904, umphathi we-crane wokuqala wenkampani ogama lakhe lingu-Allen-Bradley walethwa embukisweni waseSt. Louis ngo-1904 ukuze abambe iqhaza kulo mbukiso, kwaphuma umkhiqizo osemthethweni weRockwell. Ngo-1909, inkampani yaguqula ngokusemthethweni igama layo yaba ngu-Allen-Bradley Corporation futhi yathuthela eMilwaukee. UDkt Allen usebenza njengomongameli, uLynde Bradley usebenza njengephini likamongameli kanye nesikhulu esiphezulu kwezezimali, kanti uBradley naye usebenza njengoNobhala-Jikelele kanye nesikhulu esiphezulu. Ngenkathi u-Allen-Bradley emisa ihhovisi lokuthengisa eNew York okokuqala ngqa, futhi kwethulwa nemikhiqizo emisha enamandla amakhulu, ukuthengisa kwenkampani kukhuphuke unyaka nonyaka, ikakhulukazi "i-bradleystat" rheostat esetshenziswa kuma-panel control wezimoto nakuma-panels omsakazo. Ukudumisa nokuthengisa okushisayo kudlale indima ebalulekile enkampanini.
1903: NgoDisemba 12, uLinde-Bradley noStanton Allen basungula i-Compression Varistor Company futhi baqala ukukhiqiza imikhiqizo ye-AB. Ngo-1909 yaqanjwa kabusha ngokuthi i-Allen Bradley Company.
1904: Iqoqo lokuqala labalawuli be-crane (uhlobo lwesilawuli se-A-10) olwenziwe ekukhiqizweni okukhulu lwathunyelwa eSt. Louis World Expo ukuze libambe iqhaza. Ngemuva kwalokho, inkampani ithole i-oda lokuqala elikhulu labalawuli be-crane -13, elinganiselwa ku- $ 1,000.
1917: U-Allen-Bradley unabasebenzi abayi-150 kanti ulayini wayo wokukhiqiza uhlanganisa ama-starters kanye nama-switch okuzenzakalelayo, ama-breaker breaker, ama-relays nezinye izinto zikagesi. Imiyalo kaHulumeni ngesikhathi seMpi Yezwe Yokuqala yaletha ukuthengiswa kwale nkampani ezindaweni ezingakaze zibonwe ngaphambili.
Ngo-1918: UJulia Bolinsky uba yisisebenzi sokuqala sowesifazane esitshalweni i-Allen Bradley.
Ama-1920: Ngo-Agasti 11, ingqungquthela yokuqala yokuthengisa yakwa-AB yabanjelwa eMilwaukee. Ngo-Agasti 14, umcimbi wokuqala wabasebenzi owahlelwa yinkampani wabanjelwa eMilwaukee Grant Park.
1924: Ilogo ye-octagonal iba wuphawu lokuhweba lenkampani. Kamuva, igama elithi quality laqoshwa kulogo. Ukugxila kwikhwalithi sekuyi-DNA yenkampani yamakhulu eminyaka.
Ngo-1932: Ukudangala kwezomnotho emhlabeni kube nomthelela omkhulu enkampanini. Ukuze kudanjiswe le nkinga, inkampani yethule uhlelo olukhethekile lokunxephezela abasebenzi ngemiholo elahlekile ngamasheya. Le phrojekthi seyenziwe unyaka. Ekugcineni, u-Alan Bradley uthenge wonke amasheya ngenzalo ka-6%.
Ngo-1937: Imisebenzi ye-R & D eyavela ekuqaleni kweminyaka yama-1930 yakhiqiza ubuchwepheshe nemikhiqizo eminingi emisha, okubaluleke kakhulu okwakuyi-starter coil starter eyavela ngo-1934 kanye ne-thermoplastic resistor eyavela ngo-1935. Ngo-1937, inani labasebenzi baka-Allen Bradley lase lifinyelele Izinga langaphambi komnotho, futhi ukuthengisa kufinyelele kwirekhodi $ 4 million.
Ngo-1943: Ngesikhathi seMpi Yezwe Yesibili, abasebenzi bezinkampani bayisekela ngenkuthalo impi elwa nama-fascist, kwavela umcimbi wokuqala wokunikela ngegazi wenkampani ngokubanzi, futhi wabamba iqhaza kwiRed Cross nasekuqeqesheni ezempi kwabesifazane.
1954: Iqembu le-Allen Bradley kanye neqembu lama-chorus lakhula ngokushesha laba yiqembu elisebenza kahle. Ngaphezu kokuphindwaphindwa okunjengekhonsathi yesidlo sasemini ekomkhulu laseMilwaukee, i-orchestra nayo iyenzela izinkampani eziningi kanye nemiphakathi. Ngo-1954, ngokusekelwa yilowo owayengumongameli uFred Loock, iqembu lomculo wezinsimbi laqala uhambo lwalo lokuqala lobungane e-United States naseCanada. Ingqikithi yemidlalo engu-12 yenziwe.
1962: Ngo-Okthoba 31, uHarry Bradley wacindezela inkinobho ewashini ephezulu ye-Allen Bradley Building eyakhiwa.
Ngo-1964: Ibhilidi elidumile i-Allen Bradley Building laqedwa futhi laba yisikhungo esisha senkampani kanye nocwaningo.
Ngo-1969: U-Allen Bradley wandise umthamo wokukhiqiza ngaphandle kweNyakatho Melika, kanti isizinda sokuqala sokukhiqiza sase-Europe, i-Allen Bradley UK Ltd., saqedwa eBletchley, eNgilandi (kamuva esabizwa ngeMilton Keynes).
Ngo-1972: NgoMashi 3, u-Allen-Bradley waqala ukuzibandakanya nebhizinisi le-inverter ngokutholwa.
ngo-1980: U-Allen Bradley uya emazweni aphesheya. Ngo-1985, ukuthengiswa kwezimakethe zomhlaba wonke kwaba ne-20% yemali engenayo yokuthengisa yenkampani.
1985: IRockwell International ithole u-Allen Bradley.
1988: I-Rockwell Automation isungule inkampani yokuqala e-China, i-Allen Bradley (Xiamen) Co., Ltd.
IRockwell International ithola iRyan Electric Company. Ukuhlanganiswa kuka-Allen Bradley noRyan Electric kwenza iRockwell Automation esanda kusungulwa inkampani ehamba phambili emkhakheni we-automation factory. Le nkampani iphinde yathola umnyango we-automation software we-ICOM futhi yasungula i-Rockwell Software.
Unyaka ka-1999: Idolobha lakubo lika-Allen Bradley eMilwaukee, eWisconsin, laba likomkhulu leRockwell International.
Unyaka 2001: I-Rockwell International Inc. ihlukaniswe neRockwell Collins futhi yaguqula igama layo yaba yiRockwell Automation. Ixhaswa yimikhiqizo edume umhlaba wonke-u-Allen Bradley, uRyan Electric, uDodge noRockwell Software njengenkampani yomphakathi ezimele.
Unyaka ka-2003: I-Rockwell Automation, enamagatsha angaphezu kwama-450 emazweni angaphezu kwama-80 emhlabeni jikelele, izoqhubeka nokwenza imizamo engapheli yokuba umphakeli obaluleke kakhulu wamandla, ukulawula kanye nezixazululo zolwazi kumakhasimende.
unyaka 2004: Ukukhula kwebhizinisi leRockwell Automation ngo-2004 kukhombise ukukhula kwamadijithi amabili, okukhomba ukuthi njengongoti bezemvelo abasezingeni lomhlaba, kudlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni imakethe yezimboni yaseChina.
Kwasungulwa amagatsha aseNanjing naseQingdao
-UKeith Northbush uvakashele eChina okokuqala njenge-CEO
Ukukhula kwebhizinisi okuqhubekayo ngamadijithi ama-2
- Emhlabeni wonke khipha isithombe esisha sha: “Lalela. Cabanga. Xazulula ”(Lalela, thanda, futhi usebenze kanzima)
-Ukusungulwa kwegatsha eChengdu, idolobha elikhulu eningizimu-ntshonalanga, kusho ukutshalwa kwezimali okuqhubekayo eChina nokuzimisela ukuzinikela ekuthuthukiseni iNingizimu-ntshonalanga yeChina
Igatsha -Zhengzhou yasungulwa
Igatsha -Harbin lasungulwa
Abasebenzi abangaphezu kuka-1 000 eChina
-Ukusungulwa kwendlunkulu yomhlaba wonke yebhizinisi lokulawula ukushintshwa kwezimboni eShanghai, kumaka isu lamakethe lamakhasimende
- Mnu. U-Ou Ruitao wakhonza njengomphathi jikelele wase China, wahola iqembu lase China ukukhuthaza ukukhula kweChina
Amahhovisi egatsha -Hangzhou, Jinan, kanye neTianjin asungulwa
-Rockwell Automation Control Integration (Shanghai) Co, Ltd. ivuliwe
-Rockwell Automation isungule izinhlangano ezingama-25 zokuthengisa nokusebenza eChina (kufaka neHong Kong neTaiwan), futhi amalungu eqembu angaphezu kwe-1,500 akhonza imakethe yaseChina.
-Rockwell Automation (China) Co, Ltd yasungulwa ngokusemthethweni